Nihaza nofy "Grey sy crème" - Moi Mili
Home > Nihaona nofy "Grey sy crème"
Nihaona nofy "Grey sy crème"
Ilay mpamorona nofy tany am-boalohany, Moimili "Grey sy crème" dia haingo miavaka vita amin'ny tanana ho an'ny efitrano an'ny ankizy sy amin'ny efitrano maro hafa. Ny tablecloth amin'ny volo fotsy dia mifanohitra amin'ny fanampiny fanampiny. Pompom, volom-borona sy lakolosy manome azy manokana. Ity mpihaza ity dia handravaka tsara ny ao anatiny, na amin'ny volony, boho ary fomba mahazatra.
Fitaovana: kitay, landihazo, rongony, lamba, vakana hazo, lakolosy volafotsy, peratra vita amin'ny hazo, kofehy vita amin'ny landy, dantelina
Default Title - PLN 169.00 PLN